Maxkamadda Bristol UK oo Dib u Dhigtay Dacwad loo haysto Eedaysane Soomaali ah – Radio Daljir
Agoosto 31, 2015 8:30 b 0
Isniin, Ogoosto 31, 2015 (Daljir) — Maxkamadda magaalladda Bristol ee dalka Britain ayaa la soo taagay Nin Somali ah oo lagu magacabo Abdirashid Khadar, kaasi oo lagu soo oogay inuu bishii July 26-dii dilay Xaaskiisa oo la oran jirey Amal Abdi.
Eedeysanaha oo 21-jir ah lana sheegay inuu si sharci-darro ah ku joogo dalka Britain ayaa waxaa markii labaad la soo taagay Maxkamadda oo socotay muddo 16 daqiiqo oo keliya, iyadoo lagu soo oogay inuu dilay Xaaskiisa oo ay isku soo guursadeen dalka Ethiopia.
Eedeysanaha ayaa la sheegay in Dacwadiisa dib loo dhegeysan doono bilowga bisha Janaayo ee sannadka soo socda.
Baarayaasha Boliska ayaa sheegy inuu Eedeysanuhu soo wacay Boliska, markii uu dilay Xaaskiisa, iyadoo ay Boliska ugu tageen isagoo gacmihiisa ku farxalanayo Kaadidiisa, waa sida ay hadalka u dhigeen.
Marxuumadda ayaa la sheegay inay u geeriyootay dhaawacyo tooreey looga dhuftay Luqunta, dhabarka iyo gacanta midig.